Somaliland: Abaaraha, Covid-19 iyo doorashooyinka ma isqaban karaan?
Home WARARKA Somaliland: Abaaraha, Covid-19 iyo doorashooyinka ma isqaban karaan?
Hargeysa(Berberanews)-Xukuumadda Somaliland ayaa go’aamo kasoo saartay xaaladda dalka ee xilligan Iyo duruufaha ku Xeeran ee mushkiladdaha Abbaaraha Iyo xannuunka Coronavirus ee ku xeeran doorashooyinka.
Shirkii Gollaha Wasiirada jamhuuriyadda Somaliland oo maanta yeeshay fadhigoodii tododobadla ahaa, ayaa laga soo saaray go’aamo la xidhiidha arrimahaa Iyo waxa laga yeelayo.
Qoraal kasoo baxay fadhiga Gollaha wasiirnada oo Uu shirt guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, Isla markaana uu ku weheliyay Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil (Saylici) oo ku qabsoomay habka Maqalka iyo Muuqaalka ah ee (Video Conference), ayaanu dhignaa sidan:-
“Fadhiga waxa warbiximo lagaga dhegeystay wasiirada wasaaraddaha arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah, horumarinta caafimaadka iyo diinta iyo Awqaafta. Iyadoo goluhuna meel cad iska taagay arrinta doorashooyinka inagu soo foolka leh.
War-Bixinta Guddida Abbaaraha.
Ø In Xukuumaddu 16-kii (lix iyo toban) maalmood ee u dembeeyey ay biyo dhan 6,650 Foosto gaadhsiisey 133 Tuulo (boqol iyo saddex iyo soddon) oo ku kala yaalla Gobollada Togdheer, Sool, Sanaag, Saraar iyo Maroodi-jeex, kharashka ku baxayna uu dhan yahay Toddoba iyo afartan kun oo doollar ($47,000).
Ø Si loo helo biyo, loogana baxo biyo yaraanta xukuumaddu waxay dayactirtay ceelal ku kala yaalla Gobollada Sool, Sanaag, Togdheer, Maroodi-jeex, Buuhoodle, Daad-madheedh iyo Gabiley, kuwaas oo ay ku baxday lacag dhan saddex iyo toddobaatan kun toddoba boqol afar iyo soddon kun oo dollar ($73,734).
Guddida Covid 19
Ø In dadka Somaliland illaa hadda ay tallaalkii Covid 19 qaateen 17,000 (Toddoba iyo toban Kun) oo qof.
Ø In Axadda shir qaran la qaban-doono oo ay qayb ka noqon doonaan ganacsatada dalku, kaas oo lagu gorfaynayo habkii loo heli lahaa awood dhaqaale oo lagu soo iibiyo tallaal, maaddaama tallaalka hadda yaallaa ku filnayn bulshada Somaliland, intaa ka dibna loo hawlgalo sidii tallaal dalka loo keeni lahaa.
Ø In qaar ka mid ah saaxiibbada Somaliland oo balanqaaday deeq tallaal ahi ay keeni doonaan dalka.
Ugu danbayn goluhu waxa uu go’aamiyey in aan doorashada hakad loo gelin-doonin abaaraha iyo xannuunka Covid 19 awgood, doorashaduna ku qabsoomi doonto wakhtigeedii, hase yeeshee la dardar-gelin doono dedaalka iyo hawlgalka abaaraha iyo Covid 19″ ayaa lagu yidhi, qoraalka oo nuqul ka mid ah soo gaadhay shebekadda .
Previous articleSOMTEL ma Sharkad la-wada leeyahay ayay doonaysa in ay noqoto, Mise waa sheeko kale?
Next articleSharma Boy: “Aniga waxaan murti u aqaanaa raabka”